Isifundo se-Emotional Tone Scale
I-skali semizwa wonke umuntu abhekana nayo empilweni, kusuka phezulu kuya phansi.
Ungakuqagela kanjani ngokunembile ukuziphatha kwalowo ozoba umlingani wakho, umlingani webhizinisi, isisebenzi noma umngane—ngaphambi kokuzibophezela ebudlelwaneni.
Amathuluzi alula ongawasebenzisa ukukhulisa isimo semizwa yakho noma somunye umuntu.
Kukangaki uzwe othile ethi, “Angimqondi yena”? Kwesinye isikhathi izenzo ezingenangqondo nezingalindelekile zibonakala ziyinsakavukela phakathi kwabafowethu.
Iqiniso ukuthi, akukaze kube khona indlela esebenzayo yokuqagela njalo indlela yokuziphatha komuntu kuze kube manje.
L. Ron Hubbard wasungula leyondlela, futhi isebenza kubo bonke abantu, ngaphandle kokukhetha.
Ngale datha,kulula ukuqagela ngokunembile ukusebenza kongase abe ngumlingani wakho wase mshadweni, umlingani webhizinisi, isisebenzi noma umngani ngaphambi kokuzibophezela ebudlelwaneni. Izingozi ezibandakanyeka ekuxhumaneni kwabantu zingagwenywa ngokuphelele noma zinciphiswe lapho ukwazi ukubikezela ngokungenaphutha ukuthi abantu bazoziphatha kanjani.
Ngokuqonda nokusebenzisa imininingwane ekulesi sifundo, zonke izingxenye zobudlelwano babantu zizokhiqiza futhi zanelise ngokwengeziwe. Uzokwazi ukuthi ungazihlanganisa nobani, ugweme bani, futhi uzokwazi ukusiza labo abagxilwe ezimweni ezingazinzi nabanye. Cabanga sewazi, ngemuva kwesikhashana esifushane, ukuthi abantu bazoziphatha kanjani kunoma yisiphi isimo. Ungakwazi. Esinye nesinye isikhathi.
Amahora ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili. Kodwa ke, ungasenza le sifundo ngejubane lakho. Ngamanye amagama, akwanele. Isifundo lesi siyinsizakalo yethu kuwe, mahhala.
Incwajana Emotional Tone Scale
Lapho sekuqediwe Isifundo se-Emotional Tone Scale , uzothola isitifiketi nge-email.
“Njengoba ngijwayelene nencwajana ethi The Emotional Tone Scale, ngaqala ukuzwana kangcono nabantu. Kusukela ekutadisheni nasekusebenziseni lobu buchwepheshe, ngithole izinzuzo ezinkulu futhi ngenkathi ngisebenzisa izivivinyo ezingokoqobo ngakujabulela ukuxhumana nabantu abaningi.
“Ngisebenzisa i-Tone Scale nolwazi lokuthi ngingakusebenzisa kanjani, ngicabange kabusha imicimbi eminingi yempilo ngashintsha nobudlelwano bami nabantu. Omakhelwane nabathengisi ezitolo sebeyekile ukungicasula. Ekwenzeni izivivinyo, bekumnandi ukubona ukumamatheka nobuso obunelisekile babantu.
“Ngalolu lwazi nalawa makhono okukhulisa ithoni engokomzwelo yabanye—konke kungenzeka! Impilo iba mnandi kakhulu, ithokozise kakhulu.”
“I-Emotional Tone Scale ibilithuluzi elingivumele ukuthi ngihlole imizwa ejwayelekile yabanye nokuthi bazosabela kanjani emazwini athile. Lokhu kukodwa kunikeza imininingwane esabekayo yokuthi umuntu uzosabela kanjani.
“Namhlanje kusihlwa bengisebenzisa lobu buchwepheshe futhi ngihlola abangani bami. Babekhononda futhi beletha amaphuzu amabi ngomngani, futhi ngangihamba kancane ngibuka njengoba lokhu kwehlisa esikalini sezwi elibi. Kodwa ke, amathuluzi engiwanikezwe esifundweni se-The Emotional Tone Scale angivumela ukuthi ngikubone ngokushesha lokhu, futhi ngisabele ngokushesha ngokuzibandakanya ngezwi eliphakeme, ukuze ngibabuyise ngempumelelo isilinganiso sezwi lomzwelo.
“Imvamisa bengizobeka lokhu endabeni kube yinto ebanga usizi, kepha manje sengiyayibona imiphumela yamazwana kanye nokuthi imibono ibiveza umbono—obungewona umqondo omuhle noma omuhle—usiza ukwehlisa laba bantu isikali sethoni elingokomzwelo.
“Angikaze ngithole ithuluzi elisebenza ngokungaguquguquki lokukwazi ukukhulisa imizwa yomuntu. Namuhla kusihlwa, lapho umuntu engisebenza naye ejabule kakhulu njengoba umkakhe emnikeza usizi, ngikwazile ukumkhulisa esikalini sezwi, futhi ngibonile ukuthi naye ubemnandi kumkakhe, esiza ukumkhulisa esikalini sezwi.
"Leli thuluzi ngelinye lamakhono engiwazuzile, angazi ngempela ukuthi ngiphile kanjani ngaphandle kwawo."